"အပြာစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည် Erectile လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသလား။ ပုဒ်မခွဲနှင့် latent ကြီးထွားမှုကိန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှရရှိသောရလဒ်များ" (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
နိဒါန်း: သူ၏ဆက်စပ်မှုတဦးတည်းအရာလို့ပြောပေမယ့်ကိုယောရှု Grubbs အခြားပြောပါတယ်
လူသားတို့ကိုကုန်းနှီးခဲ့သည့်သုတေသီ "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"နှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကအခိုင်အမာ"အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်အခြားစှဲကနေလုပ်ငန်းဆောင်တာ, "ယခုကသူ့ -dexter ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် ED သို့လှည့်ခဲ့သည်။ ယောရှုသည် Grubbs ရဲ့ အသစ်သောစက္ကူ နုပျိုသော ED ရောဂါကူးစက်မှုမရှိဟုအခိုင်အမာဆိုထားသည်။
ကြိုတင်စာပေနှင့် တွဲဖက်. ကျနော်တို့မျှသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များ၏အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသက်သေအထောက်အထားရှိကွောငျးကောက်ချက်ချ။
ဒါက Two-အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအခိုင်အမာ disturbingly တိသည်:
တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီသစ်ကို Grubbs လေ့လာမှု တွေ့ရှိခဲ့ both ပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (porn စွဲ) နှင့် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ခဲ့ကြသည် ဆင်းရဲတဲ့ erectile လုပ်ဆောင်ချက်ကို အားလုံး3နမူနာအတွက်.
"ကြိုတင်စာပေ" အတွက် 40 လေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်. link ကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal။ ကြောင်းစာရင်းထဲတွင်တကယ်တော့, ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ ပြသ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ပြင်းထန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအဓိကအားဖယ်ထုတ်လိုက်ယောက်ျား
(ဤစာရေးသူငြင်းပယ်သော) က "ED ကပ်ရောဂါ" ဖွဲ့စည်းသူလူပျို၏တိုတောင်းသောများတွင်အများဆုံး ဒီလေ့လာမှုကနေချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။ သင်ကညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ED ကပ်ရောဂါနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်ဟုပြောရန်ပိုလွယ်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည် porn-induced ED မှပြင်းထန်စွာခံစားနေရသူများကိုသူတို့လိင်မဆက်ဆံပါကလေ့လာရန်ငြင်းဆန်ပါက၊
As RebootNation တည်ထောင်သူ ဂါယူဆပါသည် တစ်ဦးအကြောင်းကိုဆိုပါတယ် အလားတူလေ့လာမှု: ညစ်ညမ်းရောဂါနှင့် ED အကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအမျိုးသားများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အဆုတ်ကင်ဆာအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်ကင်ဆာကင်းသောဘာသာရပ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်တူသည်။ ” (ဂါပြင်းထန် PIED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့် ယခုကတခြားယောက်ျား porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကူညီပေးသည်.)
ဒီ Grubbs-ရေးသားလေ့လာမှုများအကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် နှစ်ခုလုံး porn စွဲ နှင့် ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (လိင်မှုဆိုင်ရာမလှုပ်ရှားသောယောက်ျားများနှင့် ED ရောဂါရှိအမျိုးသားများကိုဖယ်ထုတ်နေစဉ်) သည်ဤစာတမ်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ED (PIED) အားလုံးလုံးလွင့်စင်သွားစေသကဲ့သို့ဖတ်ရသည်။ ဒေါက်တာဂရော့ဘ်စ်၏သံသယဖြစ်ဖွယ်စွပ်စွဲချက်များကိုလိုက်နာသူများသည်ဤ“ လုပ်ရပ်” သည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။
မှတ်ချက်။ ။ လေ့လာမှုတွင် Joshua Grubbs နှင့် Mateusz Gola နှစ်ခုစလုံးကိုစာရေးသူအဖြစ်ဖော်ပြထားသော်လည်း Grubbs သည်“ အချက်အလက်ရယူခြင်း”၊ “ အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်း” နှင့်“ စာမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း” အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Gola သည်“ အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း” နှင့်သာကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါက Josh Grubbs ရဲ့ကလေးပဲ။
အနီရောင်အလံ: လိင်တက်ကြွယောက်ျား၏3အုပ်စုများကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အုပ်စုတစ်ခုစီ၏ပျမ်းမျှအသက်ကိုသတိပြုပါ။ နမူနာ ၃ တွင် PIED တီထွင်ရန်အသက် ၁၉ နှစ် (နမူနာ ၁) သည်ရှားပါးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုအများဆုံးခံရသည့်အသက်အပိုင်းအခြားများပါဝင်သည်။ အသက် ၄၀ ကျော်သူများအနေဖြင့်အသက် ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်အစောပိုင်းအမျိုးသားများ (နမူနာ ၂) သည်အင်တာနက်ပေါ်မှလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုများကို အသုံးပြု၍ ကြီးပြင်းလာခြင်းမရှိပါ။
နမူနာ 1: စိတ်ပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများ: ပျမ်းမျှအသက် 19.8 (N ကို = 147)
နမူနာ 2: အွန်လိုင်းစစ်တမ်း: ပျမ်းမျှအသက် 46.5 (N ကို = 297)
နမူနာ 3: အွန်လိုင်းစစ်တမ်း: ပျမ်းမျှအသက် 33.5 (N ကို = 433)
လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသော3အုပ်စုများကို (IIEF-5 သုံးပြီး) functioning erectile အပေါ်မျှမျှတတမြင့်မားသောသွင်းယူ:
ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းလောင်သူကိုလိင်တက်ကြွယောက်ျား၏3နမူနာတှငျကြှနျုပျတို့တှေ့ရသော erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများကအလွန်မြင့်မား။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
တနည်းကား, ဒီလေ့လာမှုချန်လှပ်အပျိုကညာအဖြစ်ကြီးမားသောရှက်ကြောက်, လိင်မလှုပ်မရှားယောက်ျားနှင့်ပြင်းထန်သော ED နှင့်အတူပါဆုံးမည်သူမဆိုပါဝငျ: အများဆုံးညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိသည်သောသူအလွန်ယောက်ျား။ တစ်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ရှိခဲ့သည်အဖြစ်လေ့လာမှုကနေဖယ်ထုတ်လိုက်အဆိုပါယောက်ျား, လူဦးရေရဲ့တစ်ဦးသိသာသောအဘို့ကိုကိုယ်စားပြုသည် လိင်ကမလှုပ်မရှားလုလင်တို့သည် လူ ED သို့မဟုတ်ပြဿနာအနိမ့်လိင်စိတ်နှင့်အတူ 40 အောက်မှာယောက်ျား.
IIEF-5 (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ကိုအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် လိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်နေသောယောက်ျားသာ (လိင်တက်ကြွယောက်ျား) ။ တကယ်တော့တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဆရာဝန်ဟာ IIEF သာနောက်ဆုံး4ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းလိင်ခဲ့ကြသူလူတို့အားရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအတည်ပြုပြောပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံသော porn-induced ED သည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူ၏လက်ရှိ ဦး တည်ရာဖြစ်လျှင်မှတ်မိလွယ်သောအဆင့်များမှာတစ်ခါတစ်ရံ၊ ထို့ကြောင့်, porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ (နှင့်သူတို့ရှိသည်သောယောက်ျား), IIEF-5 ကိုအသုံးပြု။ အကဲဖြတ်ဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မယ်။ porn ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သတ်သောပြcommonနာများမှာ -
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်အတွက်စိုက်ထူသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ porn မှတ်မိဖို့လိုအပ်နေ
porn ကို အသုံးပြု. သာ. ကွီးမွတျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု တစ်ဖက်နှင့်အတူထက်
ကျဆင်းနေလိင်စိတ်နိုးထ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် (s) ကိုအတူ
ဤသည်ဖှယျအဖြစ်မှန်မှာအနည်းဆုံးအားဖြင့်ပံ့ပိုး porn အသုံးပြုမှုကိုသရုပ်ပြ7လေ့လာမှုများ ထင်ရှားစွာ ဖြစ်စေတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်တစ်ခုခင်းကျင်း။ အစား ED ထက် porn-သွေးဆောင် anorgasmia နှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့သူယောက်ျား, ပါဝင်ပတ်သက်ခြောက်လေ့လာမှုများသုံးခု။ အခြားနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ porn-သွေးဆောင်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် PIED အနာကိုငြိမ်းစေသူကိုလူနာတစ်ဦးရောနှောပါရှိသော။ ဖြည့်စွက်ကာ, လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ် porn မှ masturbated သူကိုကုသမှု-ရှာကြံယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု သူတို့ထဲက 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အောက်ဆုံးလိုင်း: ထို့အပြင်ဖွယ်ရှိ "ဟုအဆိုပါဖွဲ့စည်းသူလူပျို၏များစွာသော (သို့မဟုတ်တောင်မှအများဆုံး) ချန်လှပ်ရန်ED ကပ်ရောဂါ"ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုစာပေနှင့်အများအပြားနာတာရှည် porn အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်သတင်းပေးပို့သည်အခြားညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖမ်းခဲ့ပါဘူး။
Grubbs ၏လေ့လာမှုနှင့် (သူ၏ tweets) နှင့်ဆန့်ကျင်လျက်၊ နှစ်ခုလုံး porn စွဲ နှင့် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ဆင်းရဲတဲ့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်
သုညနှစ်ခု variable တွေကိုအကြားမျှဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်; 1.00 နှစ်ခု variable တွေကိုအကြားတစ်ဦးပြည့်စုံဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ အရေအတွက်2variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုဟာပိုမိုအားကောင်းအဆိုပါပိုကြီး။ နံပါတ်တစ်ရှိပါက အနှုတ် နိမိတ်ကအရာနှစ်ခုအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နှလုံးရောဂါအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သာမန်ဘာသာစကားမှာ, လေ့ကျင့်ခန်းနှလုံးရောဂါ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့နည်းစေသည်။ မတူဘဲ, အဝလွန်ခြင်းတစ်ဦးရှိပါတယ် အပြုသဘောဆက်စပ်မှု နှလုံးရောဂါနှင့်အတူ။ )
အပိုင်း 1: Porn စွဲနှင့် erectile လုပ်ဆောင်ချက်ကို
Grubbs ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်တိုင်းတာရန်အသုံးပြုသော4မေးခွန်းများကို (porn စွဲ) ခဲ့ကြသည်:
စာတမ်း၏နိဒါန်းသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးချက်အခန်းကဏ္ of မှစာဖတ်သူတစ် ဦး ကဤအချက်ကိုလက်လွတ်သွားဖွယ်ရှိသည် နှစ်ခုလုံး porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (porn စွဲ) ၏အဆင့်ဆင့်၏အဆင့်ဆင့် IIEF-5 အပေါ်အနိမ့်ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည် (ထို Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်း), အရာလျှော့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုညွှန်ပြ။ သို့သျောလညျး, ပင်စာရေးဆရာများ do ကြောင်း porn စွဲဆင်းရဲတဲ့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာမှဆက်စပ်ခဲ့ဝန်ခံ:
ဒီဆက်ဆံရေးခဲ့ပေမယ့်အလားတူပဲအားလုံး3နမူနာအတွက် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားတသမတ်တည်းအနုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးကို, ရှိခဲ့သည် ပြင်းအားအလယ်အလတ်သာသေးငယ်တဲ့ (r = -0.20 မှ -0.33) နှင့် Holmes ဆုံးမသောလျှောက်လွှာအပြီးနမူနာ 1 အတွက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်မပေးခဲ့ပါဘူး။
သတိရပါအပျက်သဘောဆောင်သောဆိုင်းဘုတ်များဆင်းရဲတဲ့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဆိုလိုတယ်သော IIEF အပေါ်အနိမ့်ရမှတ်ကိုဆိုလိုသည်။ ရလဒ် porn စွဲကြီးပင်အတော်လေးကျန်းမာ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ထုတ်ဖေါ် သိသိသာသာ ဆက်စပ်သော ဆင်းရဲတဲ့ စိုက်ထူ။
ငါဆိုသည်ကားဝံ့သင်မည်သို့မေးဖို့မိနစ်, စောင့်ဆိုင်း သိသိသာသာ ဆက်စပ်လား အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုမှကောက်နုတ်ချက်သည်ဤဆက်နွယ်မှုကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာကြေငြာသည်မဟုတ်လော (-0.20 မှ -0.33) “ အငယ်မှအလယ်အလတ်” မျှသာမဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်လား။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် Grubb ၏ဖော်ပြချက်များအသုံးပြုမှုသည်သင်ဖတ်ရှုသည့် Grubbs ၏လေ့လာမှုအပေါ် မူတည်၍ သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ Grubbs ၏လေ့လာမှုသည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုပါကအထက်ပါနံပါတ်များသည်အလွန်နည်းပါးသောဆက်နွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့ Grubbs ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးလေ့လာမှု (ဖွင့်လျှင် "စွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှခံစားစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းသူကကြေငြာခဲ့သည် သေးငယ် ဤထက်ပိုသော "အားကောင်းတဲ့ကြားဆက်ဆံရေး။ " ဖွဲ့စည်း တကယ်တော့, ဂရော့ဘ်၏ဘာသာရေးနှင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုတို့အကြား” ခိုင်မာသည့်ဆက်နွယ်မှုမှာသာဖြစ်သည် 0.30! သို့သျောလညျးသူကရဲတင်းတဲ့အတွက်ဆောငျကွဉျးပေးဖို့အသုံးပြု porn စွဲလုံးဝအသစ်နှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာ, မော်ဒယ်။ ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်းကျောက်ဝိုင်း, ဆက်စပ်မှုနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၌တွေ့ကြသည် တစ်ပိုရှည် YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤအပိုင်းကို.
လက်ရှိ ED လေ့လာမှုတွင် porn စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆင်းရဲသောစိုက်ထူမှုများအကြားတွင်အခိုင်မာဆုံးဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးသည်။-0.33) Grubbs ရဲ့အကြီးဆုံးနမူနာ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒါက သာ porn သွေးဆောင် ED အစီရင်ခံရန်အများဆုံးဖွယ်ရှိပျမ်းမျှအသက်နမူနာ: နမူနာ3ပျမ်းမျှအသက်: 33.5 (433 ဘာသာရပ်များ).
အပိုင်း 2: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile လုပ်ဆောင်ချက်ကို
စက္ကူတသမတ်တည်းမြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားဆက်စပ်မှု downplays ဆက်စပ်မှုနေစဉ် ခဲ့ကြ အထူးသဖြင့်နမူနာ3များအတွက်, ကိုယ့်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာနမူနာခဲ့ပြီးသော - အားလုံး3အုပ်စုများအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
သို့သျောလညျး၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ နမူနာ 3, ရှိပါသည် နည်းနည်းသက်သေအထောက်အထား ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကိုယ်တိုင်နှင့် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြား link တစ်ခု၏။ တွင် နမူနာ 1 နှင့် 2, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားလင့်များတသမတ်တည်းအားနည်းခြင်းနှင့်အရေးခဲ့ကြသည်
အောက်က3အုပ်စုများ porn ကြည့်နှင့် (အပျက်သဘောဆောင်သောနိမိတ်လက္ခဏာထက် သာ. ကြီးမြတ်သော porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူကိုဆိုလိုသည်) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ erectile လည်ပတ်ငွေပမာဏအကြားဆက်စပ်မှုသူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှအားနေ့စဉ်မိနစ်နှင့်အတူနေသောခေါင်းစဉ်:
မျှမျှတတရိုးရှင်းသောရလဒ်များ - အများဆုံး porn ကိုအသုံးပြုသည့်နမူနာ (# 3) သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောစိုက်ထူမှုများအကြားတွင်အပြင်းထန်ဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဘာကြောင့် Grubbs သည်ဤပုံစံကိုသူ၏ရေးသားမှုတွင်အဓိကမထားသနည်း၊ ၎င်းကိုပျောက်ကွယ်စေရန်စာရင်းအင်းကိုင်တွယ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါလော။
နမူနာ # ၂ - ပျမ်းမျှအသက် ၄၆.၅ - သူတို့ကတစ်နေ့လျှင်သာ 13 မိနစ်ပျမ်းမျှ! 15.3 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးစံသွေဖည်မှုနှင့်အတူဤလူတို့သညျအခြို့သောအဘို့ကိုငါးဆယ်-တစ်ခုခုရှိကြ၏။ ဤရွေ့ကားအသက်ကြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (တစ်ခုတည်းကိုသာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှအေးစက်သူတို့ကိုလျော့နည်းအားနည်းချက်အောင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ) စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးထွက်မစတင်ခဲ့ပါဘူး။ Grubbs တွေ့ရှိခဲ့သကဲ့သို့အမှန်စင်စစ်, အနည်းငယ်အသက်ကြီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအမြဲ (ထိုကဲ့သို့သောနမူနာ 33 အတွက်3ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ရှိသူများကဲ့သို့) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဒစ်ဂျစ်တယ် porn ကို အသုံးပြု. စတင်သူကိုအသုံးပြုသူများသည်ထက်, ရှိသမျှကျော်ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးဒဏ်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။
နမူနာ #3: ပျမ်းမျှအသက် 33.5 - ဖော်ပြပြီးသည်နှင့်အမျှနမူနာ ၃ သည်အကြီးဆုံးနမူနာဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီအသက်အပိုင်းအခြားသည် PIED ကိုအစီရင်ခံရန်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ နမူနာ (၃) သည်အဆင့်မြင့် porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသော erectile လည်ပတ်မှုတို့အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည် (-0.37).
ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူခြင်းနှင့်အကြားအထက်ပါလင့်ခ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား နှစ်ခုလုံး သာ. ကြီးမြတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း နှင့် ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှု၊ ဒီ Grubbs စက္ကူကအင်တာနက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေသလိုမျိုးဖတ်တာကိုတုန်လှုပ်သွားစေတယ် မပေးနိုင် ဆက်စပ်သောခံရ 40 အောက်မှာလူ ED အတွက်မှတ်တမ်းတင်မြင့်တက်။ ဒါ့အပြင်အဘယ်ကြောင့် Grubbs အများဆုံး PIED နှင့်အတူအဘယ်သူအကြီးမြတ်ဆုံး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြောင့်ထိခိုက်အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုကိုမထီမဲ့မြင်မပြုခဲ့တာလဲ သူသည်အသက်သတိမထားမိခဲ့အများဆုံးညစ်ညမ်းသွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြောင့်ထိခိုက်နေကြပါတယ်?
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလေ့လာမှုကနမူနာ # ၃ ကိုသာကိုင်တွယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Grubbs ဟာပထမဆုံးစုဆောင်းခဲ့တဲ့နမူနာဖြစ်ခဲ့ရင်၊ Grubbs ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့တာဝန်ရှိလိမ့်မယ်။ အစားနံပါတ် (၃) အတွက်အခြေခံရမှတ်များစုဆောင်းပြီးနောက်တွင်သတ်မှတ်ထားသောအသက်အပိုင်းအခြားပြင်ပရှိနမူနာနှစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်ကန ဦး နှင့်သက်ဆိုင်သောတွေ့ရှိချက်များ (နမူနာ # ၃) ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Grubbs - အကယ်၍ ဘာသာတရားကညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောဘာသာတရားဖြစ်ပါက ၀.၃၀ သည်“ အားကောင်း” သည်။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းမှုက ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါက ၀.၃၇ သည်သက်သေအထောက်အထားအကန့်အသတ်သာရှိသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Grubbs အတိတ်ကာလ unhesitatingly အလွန်အားကောင်းတဲ့စေရန်လက်ရှိပညာရေးလေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်များထက်အားနည်းဆက်စပ်မှုကိုအသုံးပြုထားပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာတောင်းဆိုမှုများ မိမိအအများဆုံးမြင့်မားလူသိရှင်ကြားလေ့လာမှုများ၌တည်၏။ Grubbs ၏ကျော်ကြားမှုသည်သူ၏စီးရီးဖြစ်သည်။ရိပ်မိ porn စွဲ“ ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်” ဟူသောသိပ္ပံနည်းကျလုံလောက်မှုမရှိသည့်အထောက်အပံ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်လေ့လာမှုများသည် ဤနေရာတွင်ဖြည်ရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ YBOP (နှင့်အမှန်တကယ်သုတေသီများ) သည် Grubbs ၏ထောက်ခံမှုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများကိုအခြားနေရာများတွင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ဆောင်းပါး 1, ဆောင်းပါး 2, ဆောင်းပါး 3.
သို့သော်ဤအချက်မထွက်ခွာမီ Grubbs ၏အများဆုံးကိုးကားထားသောစက္ကူမှအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးပါ။စွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှခံစားစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏။ " အောက်ဖော်ပြပါဇယား ၂ သည်သီးခြားနမူနာ ၂ ခုမှအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ Grubbs ၏ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာ၊ CPUI-2 (# 2) နှင့် Religiosity (# 9) အကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။
Grubbs ၏ရိပ်မိ - စွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများအားလုံးကိုဖတ်သည့်အခါဤတွင်စိတ်ထဲထားရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်သည်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲမက်ခြင်း” အဖြစ်ရမှတ် - စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုမဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းအလွန်မဟာဗျူဟာကျသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်သူ၏လေ့လာမှုများနှင့်မှတ်ချက်များကိုသူမလေ့လာခဲ့ပါကသူသည်“ စွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” ကိုသူအကဲဖြတ်သကဲ့သို့ဖတ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ Grubbs ကဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတယ်လို့ပြောရင် စေ့စ့စပ်စပ် သူသည်အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာဘာသာတရားသည်သူ၏ CPUI-9 ၏စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ မဟုတ် အမှန်တကယ် porn စွဲမဟုတ်သလိုမိမိကိုယ်ကိုတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူဖြစ်ယုံ။
စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားဆက်စပ်မှု: လေ့လာမှု 1: 0.25, လေ့လာ 2: 0.35
ဒေါက်တာ Grubbs သည့်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောခဲ့ဘူး 0.30 "ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲ" နှင့်ဘာသာတရားအကြားဆက်ဆံရေး? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူက၎င်းသည် "ကြံ့ခိုင်မှု" ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဘွဲ့ကြိုနမူနာနှစ်ခုလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရလဒ်များ (လေ့လာမှု 1, N ကို = 331; လေ့လာမှု 2, N ကို = 97) ညွှန်ပြ တစ်ဦးရှိကွောငျးကို အားကောင်းတဲ့ ညစ်ညမ်းစေရန်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ရိပ်မိစွဲအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုး။
Grubbs စဉ်းစား 0.30 ဘာသာရေးဆိုင်ရာရှေးရှေးများက၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းသာ“ ရိပ်မိ” ။ သူ၏မည်သူမျှပြcraftနာမရှိကြောင်းသူ၏အနုပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသူ၏မှတ်စုကိုထောက်ခံသောအခါ“ ကြံ့ခိုင်မှု” ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ED လေ့လာမှုတွင် Grubbs သည်ပိုမိုကြီးမားသောဆက်စပ်မှုရှိသည့်နမူနာ3အပါအဝင် porn XNUMX အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စိုက်ထူမှုများအကြားဆက်စပ်မှုကိုမည်သို့ဖော်ပြခဲ့သနည်း။0.37) ဘာသာတရား = ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု "လေ့လာမှု" ထက်မက။
“ ဖြတ်ပြီး အဆိုပါ3နမူနာ, သာတွေ့ရှိရ အလွန်ကန့်သတ် မျှသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသူ့ဟာသူလျော့နည်းသွား erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ဆက်စပ်သောသောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမောင်းနှင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုဆိုသောအခြားလူကြိုက်များသည့်ဇာတ်ကြောင်းနှင့်မကိုက်ညီသည်။ ” (အလေးပေးဖော်ပြထားသည်)
2019 ခုနှစ်, Grubbs စဉ်းစား 0.37 ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသော Erectile လည်ပတ်မှုတို့အကြားချိတ်ဆက်မှုအတွက်“ အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသောထောက်ခံမှု” ဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Grubbs ၏အမြင်များသည် ၄ ​​နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား။ သို့မဟုတ်ပါကအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ကြှနျုပျတို့သညျ "ဘက်လိုက်မှုသံသယများနှင့်ယခု Grubbs ကနေအထက်စားပွဲပေါ်မှာပြန်လည်လည်ပတ်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူးခြင်း" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခိုင်အမာထောက်ပံ့ပေးရန်လေ့လာမှု။ ကျနော်တို့ CPUI-9 ရမှတ် (ရိပ်မိ porn စွဲ) အကြားဆက်စပ်မှုမီးမောင်းထိုးပြအထက်နှင့် ယာနျဘာသာတရားကို။ ကျနော်တို့ CPUI-9 ရမှတ် (ရိပ်မိ porn စွဲ) အကြားဆက်စပ်မှုမီးမောင်းထိုးပြပြီး "အောက်တွင်porn အသုံးပြုမှုနာရီ":
လေ့လာမှု 9: စုစုပေါင်း CPUI-1 ရမှတ် (ရိပ်မိ porn စွဲ) နှင့် "porn အသုံးပြုမှုနာရီ" အကြားဆက်စပ်မှု 0.30, လေ့လာ 2: 0.32
CPUI-9 ရမှတ်တစ်ဦးရှိသည်ကိုသတိပွု အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်း ဘာသာတရား (၀.၃၀) ထက်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု” (၀.၃၁) နှင့်ဆက်ဆံရေး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်နာရီပေါင်းများစွာသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်“ ရိပ်မိသောစွဲလမ်းမှုနှုန်း” ယာနျဘာသာတရားကိုထက်။ ၎င်းသည်“ အလွန်အမင်းစွဲလန်းခြင်း = စွဲလမ်းမှု” ဖြစ်သည်။ မဟုတ် "religiosity = ညစ်ညမ်းစွဲ။ " တောင်မှ Grubbs ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်။
သို့သျောလညျး Grubbs စျယာနျဘာသာတရားကို "ကြောင်းအာမခံထားရိပ်မိ porn စွဲဖို့စေ့စ့စပ်စပ်ဆက်နွယ်"(CPUI-9 ရမှတ်များ) ။ အကယ်၍ ဤသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနာရီ” သည် CPUI-9 ရှိရမှတ်များနှင့်လည်း“ ခိုင်မာစွာဆက်နွယ်မှု” ရှိသည်မှာထင်ရှားသည်။ သို့သော် Grubbs ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုဖတ်ရှုခြင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ စာနယ်ဇင်းမှသူ၏မှတ်ချက်များ (သို့) သူ၏ Twitter feed မှသင်ရရှိသည့်အရာမဟုတ်ပါ။
အမှန်စင်စစ် Grubbs ဤသည်၌မိမိအမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကဉျြးရုံးဖျော ထူးခြားသောတဖက်သတ် 2016 စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဆောင်းပါးအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုသူမဟုတ်မမှန် CPUI-9 ရမှတ် (ရိပ်မိ porn စွဲ) ကိုအသုံးပြု porn ပမာဏကိုမှဆက်စပ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြောဆိုသောပေမယ် သာ ယာနျဘာသာတရားကိုမှ related:
"porn စှဲလမျးသူ" အမည်တပ်ထားသောခံနေရ တစ်ဖက်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်ပင်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးပြုပုံ ရှိပါတယ် ဘာမြှ porn ၏ပမာဏနှင့်အတူလူတအမြင်များလုပ်ဖို့ယောရှုသည် Grubbs, Bowling Green တက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခကပြောပါတယ်။ အဲဒီအစား, ဒါဟာရှိပါတယ် everythinအတူလုပ်ဖို့ဂရမ် religiosity...
... Grubbs "ကတောင်းဆိုထားသည်ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ။ "" ဒါဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်အခြားစှဲထံမှလည်ပတ်သော။ "(အလေးပေးထောက်ပံ့)
ဤရွေ့ကားသည်သူ၏တွေ့ရှိချက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်လုပ်အံ့သြထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဇယားများအရ CPUI-9 ရမှတ်များ (“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု”) သည်အမှန်တကယ်တွင်ဘာသာတရားများထက်“ အသုံးပြုချိန်” နှင့်ပိုမိုဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောထောက်ခံမှုမရှိသောအခိုင်အမာက YBOP ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု Dr. Grubbs ၏အရိပ်စွဲစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများအကြောင်း
အခုတော့ကျနော်တို့ကိုသူ (အထူးသဖြင့်အရှိဆုံးမှာ-အန္တရာယ်အုပ်စု) သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုပယ်ချကြောင်းရေး-Up ထုတ်လုပ်ရှိရာကဒီလက်ရှိပညာရေးစက္ကူနှင့်နောက်တဖန်ဒါလုပျဆောငျရမညျ, အ omits လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn ချိတ်ဆက်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများနှင့်လှဲထငျ လုလင်တို့သည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေ။ ဤစာတမ်းခြယ်သထားပြီးပုံကသူ့ဒေတာမမကိုက်ညီမှု စာပေ၏လက်ရှိပြည်နယ်။ ဝမ်းနည်းစရာ Grubbs ပင် twitter အပေါ်သူ၏ဆက်စပ်မှု mischaracterizing မှရောကျလာ:
အဆိုပါဒေါက်တာ Grubbs bizzaro-stats ကမ္ဘာကြီးကိုအမြင်တွင်, 0.37 ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. မဟုတ်ပါဘူး (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုဆင်းရဲသော Erectile လည်ပတ်မှုအကြားဆက်စပ်မှု) နေစဉ် 0.30 ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါသည် (ဘာသာတရားနှင့်ဘာသာရေးစွဲစွဲလမ်းမှုအကြားဆက်စပ်မှု) ။
နမူနာ shell ကိုဂိမ်း?
Grubbs ၏နမူနာများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်၊ ညစ်ညမ်းမှုပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောဘုံအသိပညာမှာလက်ရှိညစ်ညမ်းလိင်မှုဆိုင်ရာပြreportingနာများကိုအများဆုံးတင်ပြသောအမျိုးသားများ၏အသက်အရွယ်သည် ၂၀ နှစ်နှင့် ၃၀ အစောပိုင်းကာလများတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Grubbs ၏နမူနာသုံးမျိုးအနက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစုံစမ်းရန်အသင့်တော်ဆုံးနမူနာမှာနမူနာ ၃ ဖြစ်သည်။
နမူနာ3(ပျှမ်းမျှအသက် 33.5) မိမိနမူနာ၏, အကြီးဆုံးသောကြောင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်မှသာစံပြအသက်အရွယ်အုပ်စုအနီးဆုံးနမူနာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဝေးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာနမူနာ3ပုံခဲ့တယ် အစောဆုံး ယင်းနမူနာ၏ Grubbs (2017 ၏နွေဦး) စုဆောင်း။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆ, နမူနာ3(ချို့ယွင်း erectile ကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုပြသ0.37) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ (0.33) အခြေခံမှာ -? အများအပြားလိင်မလှုပ်မရှားလူတို့သညျ (မဟာဗျူဟာ) ကို IIEF ၏အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သော်လည်း။
ဒါကအဆင်မပြေမေးခွန်းထုတ်။ အဘယ်ကြောင့် Grubbs သည်သူ၏ရလဒ်များကိုတက်မရေးခဲ့ဘူး သာ ဒီနမူနာ3အကြောင်းကို, အရှိဆုံးမှာ-အန္တရာယ်အုပ်စုတစ်စု? သူသည်ဤဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစက္ကူဖြစ်ရပြီလို ... porn-သွေးဆောင် erectile ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏တည်ရှိမှုအဘို့အစိုင်အခဲထောက်ခံမှုရာပူဇော်သက္ကာကို (ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့), ဒါကြောင့်ပြုမိခဲ့သည်။
Grubbs မကြောင့်ထိုသို့ပြုခဲ့ ကဲ့သို့ မိမိအပါဆုံးသက်ဆိုင်ရာအများစုယုံကြည်စိတ်ချရသောနမူနာထုတ်ဖော်ပြသပေးသောဆင်းရဲတဲ့ erectile ကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှစ်ဦးစလုံးအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှု, အဘယ်ကြောင့်သူ2ယောက်ျားပိုမိုနမူနာဖြည့်စွက်အားဖြင့်သူ့အများဆုံးဆိုင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခဲ့ပါဘူး လျော့နည်းမှာ-အန္တရာယ်အသက်အရွယ်အုပ်စုများထံမှ?
longitudinal အုပ်စုတစ်စု erectile function ကိုအတွက်နည်းနည်းပြောင်းလဲမှုကိုမွငျလြှငျ, ဒါပေမယ့်ပြဿနာအသုံးပြုသူများအထွက်ကျဆင်းသွားခဲ့ကြပေမည်
အဆိုပါလေ့လာမှုက longitudinal နမူနာ (# 3) တွင် porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုများသည်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း erectile လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
တိုတောင်းသောများတွင်ညစ်ညမ်း၏ Self-အစီရင်ခံပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ခြုံငုံနမူနာထဲမှာလည်ပတ် erectile အတွက်ပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းဖွယ်ရှိတဲ့ 1 နှစ်ကာလအတွင်း erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ဒီတွေ့ရှိချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ ပထမ၊ အုပ်စု (၃) တွင်ပါဝင်သူ (၄၃၃) ဦး အနက် (၁၁၇) ဦး သာလျှင်တစ်နှစ်လုံးအတွက်အချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိသည် (အချက် ၄ ချက်နှင့်ကြားကာလ ၄) ။ ၎င်းသည်မူရင်းပါဝင်သူများ၏ ၂၇% မျှသာရှိသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ porn အများဆုံးအသုံးပြုသောပြpornနာများ (စွဲလမ်းမှု) ကိုအများဆုံးအသုံးပြုသောဘာသာရပ်များမှာလေ့လာမှုမှထွက်သွားလေ့ရှိသည်။ ဇယား (၃) တွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်“ နာရီအသုံးပြုမှုနာရီ” ကျဆင်းခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောစစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီတိုင်း၌စွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းမှုရမှတ်များဖော်ပြထားသည်။ ယောက်ျားအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုနည်းသည်ဟုခံစားမိခြင်းသို့မဟုတ်အဆိုးဆုံးပြwithနာများရှိသည့်လေးလံသောသုံးစွဲသူများမှထွက်ခွာသွားသည်ဖြစ်စေ၊ အဆုံးစွန်သောအများဆုံးဖွယ်ရှိပုံရသည်။
ဤအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလေ့လာမှု၏ longitudinal data ကိုဆားကျောက်သားဖြင့်ယူရန်လိုအပ်သည်။
Grubbs သည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း” သည်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသော Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုရှင်းပြနိုင်သည်ဟုအထူးကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုအသုံးပြုသည်
Grubbs "ကိုယ်ကျင့်တရား Incongruence" ED တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါပြောဆိုသော, ဒါပေမယ့်သူကဂိမ်းကစားနေသည်:
ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကို (1 နမူနာထဲမှာမှတ်ထားပါနမူနာ 3) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသူ့ဟာသူ Cross-Section functioning လျော့နည်းသွား erectile နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည့်အတွက်, Self-အစီရင်ခံပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား incongruenceညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အလားတူလျော့နည်းသွား erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်, အရာနှစ်ခုလုံးကဖော်ပြခဲ့သည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လျော့နည်းသွား erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေးများအပြင်၌။ ဤအတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားဆက်ဆံရေးသရုပ်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြား2နမူနာကနေရလဒ်တွေကိုနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသောအခါ, ငါတို့ ED ကားမောင်းအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ယန္တရားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအလိုလိုထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ်ယုံအားမရအတွက်သတိထားတိုက်တွန်းကြသည်။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
MI (ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence) ဖြစ်ပါသည် အမြဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုခံစားနေရတဲ့လူတွေကဆိုးကျိုးတွေဆက်ဖြစ်နေလို့ရပ်တန့်ချင်ကြလို့ပါ။ MI သည်အမြဲတမ်း porn စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးပိုမိုဆင်းရဲသော erectile လုပ်ဆောင်မှုသည်အမြဲတမ်း porn စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောကြောင့် MI ရမှတ်များသည်ပိုမိုဆင်းရဲသော erectile လည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Grubbs ၏အခိုင်အမာဆိုသည်မှာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဆက်စပ်မှုမဟုတ်ဘဲရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်: Grubbs ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည် 8 နှစ်ပေါင်းသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းစည်းရုံး ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်“ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမကိုက်ညီခြင်း” (သို့မဟုတ်ဘာသာတရားဆိုင်ရာ) ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုကိုယ်တိုင်အသုံးမပြုခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပြproblemနာဖြစ်သည်။ သူ၏ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲသည်လူတစ် ဦး ၏အတင်းအဓမ္မအသုံးပြုမှုကိုကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အညီလက်ခံခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်တစ်မူထူးခြားသည့်အထောက်အကူပြုသောဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စာပေ၏ဤပြန်လည်သုံးသပ်သိသာထောက်ပြသည်။ ဆေးစွဲသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်သဘောမတူပါ။ ဒီမှာ မူးယစ်ဆေးစွဲဖြတ်ဘို့အဓိကလှုံ့ဆျောမှုအဖြစ်ကိုယ်ကျင့်တရားအကြောင်းပြချက်ကိုးကား:
ဂရော့ဘ်စ်ကမိမိကိုယ်ကိုဤသို့မေးသင့်သည် -“ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စိတ်စွဲလမ်းမှု၊ လောင်းကစားစွဲခြင်း၊ 'ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံ' သည်ဂရော့ဘ်စ်ကိုယ်တိုင်ပေါက်ကွဲစေသောအနီရောင်သမင်ဒရယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုများ (နှင့်သူ၏ပရိတ်သတ်ကလပ်များနှင့်) ဆက်စပ်မှုရှိသည့်သူ၏ထပ်ခါတလဲလဲလေ့လာမှုများက၎င်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သူသည်ပြimportantနာများရှိသောညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှင်းပြနိုင်သောအခြားအရေးကြီးသည့်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။
အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည် 51 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ ကြောင်း porn စွဲလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသ အလွန်ကိုအခြားစှဲနဲ့တူ။ ထို့အပြင်ဂရော့ဘ်စ်၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများကပင်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု” ရမှတ်ကိုတသမတ်တည်းဖော်ပြသည် porn ၏ပမာဏနှင့်အတူလူတအမြင်များလုပ်ဖို့တွေအများကြီးရှိသည်.
Josh Grubbs သည်အစွန်းရောက်လိုလားသူ၊ PIED ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့်ချိသူများနှင့် Nicole Prause နှင့် David Ley တို့နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ တေးရေး)
Dr. Grubbs သည်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူ Dr. Nicole Prause နှင့် Dr. David Ley တို့နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သုံးယောက်စလုံးသည်မကြာခဏဆိုသလိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်မှတ်ချက်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး၊ “ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအယူအဆကိုဆန့်ကျင်သောလှုပ်ရှားမှုသုံးခုစလုံး။ Ley နှင့် Grubbs ရှိသည် Co-ရေးသား peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ, Ley နှင့် Prause နှင့်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြီ Grubbs ၏“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှုများကိုထောက်ခံခဲ့သည် ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းသည်ထင်ရှားကတည်းက။
တုန်ခါမှုမွမ်းမံခြင်း - တွင် 2019နှစ် ဦး စလုံးသည့်အခါယောရှုသည် Grubbs ကသူ၏အစီအစဉ် - ဘက်လိုက်မှု တရားဝင် ပူးပေါင်းမဟာမိတ်များ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ www.realyourbrainonporn.com မှ Grubbs နှင့်အခြား pro-porn“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်ပါ ၀ င်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်။ စာဖတ်သူကိုသိသင့်ပါတယ် RealYBOP twitter (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏သိသာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ) လည်းအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင်ပါဝင်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် NCOSE, Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ချီးမွမ်းကြလော့ RealYBOP twitter ကိုဖွင့်သည်) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့် RealYBOP twitter ကိုသုံးသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်၎င်းတို့၏ RealYBOP အသင်း ၀ င်မှုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတွင်“ အကျိုးစီးပွားပmembershipိပက္ခ” အဖြစ်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဒါကြောင့် Ley နဲ့ Prause ဟာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒီလက်ရှိ Grubbs လေ့လာမှုကိုးကွယ် (ကအနည်းဆုံးမိမိအရေး-Up လျှင်မ အမှန်တကယ် ဆက်စပ်မှုများ) ။ ဒီတွစ်တာမှာ Prause ကခိုင်လုံတဲ့အခြေခံမရှိဘဲ“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” ဆက်နွယ်မှုကစိုက်ထူခြင်းပြreallyနာများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ Grubbs သည်သူ၏မဟာမိတ်နှင့်သဘောတူပုံရသည်။
Ley နှင့် Prause ရည်မှန်းချက်လေ့လာသူများမရှိကြပေ။ နှစ်ဦးစလုံးရှိတယ် နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုမျိုးစုံကိုမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ရပ်များအတွက်စေ့စပ် သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုရှုတ်ချခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ကြောင့်လူတွေဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "astroturf" ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ Prause ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးတွင်လုပ်ကိုင်နေသောလူများကို။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုဖြစ်ပါတယ် ပြသ စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved."(အလေးပေးထောက်ပံ့)
ဒါဝိဒ်သည် Ley သာရှေ့ဖြစ်ရပ်များအများအပြားနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သည်, သူလည်းအများအပြားဆောင်းပါးများထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် တိုက်ခိုက်ခြင်းညစ်ညမ်းပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ နှင့် porn သွေးဆောင် ED ၏အယူအဆ, အဆိုးကိုအဆိုးယောက်ျား porn-ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များင့်သူ နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကိုသုံးပြီး PIED မှပြန်လည်ထူထောင်ယောက်ျားနှောင့်ယှက်။ ငွေရေးကြေးရေးအရအကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခဖြစ်နေချိန်မှာဒေးဗစ်လေဒီကရှိနေတယ် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးက X-ဟမ်းစတားများကလျော်ကြေးငွေခံရ ၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြော်ငြာရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ အထူးသဖြင့် David Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ဦးက X-ဟမ်းစတားက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (မြှောင်-Chat ကို) ။ မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns“ ထို့အပြင် Ley သည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သောစာအုပ်နှစ်အုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက်ငွေရှာသည်။လိင်စွဲလမ်းမှု၏ဒဏ္ ”ာရီ” 2012 နှင့် "ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိုင်သောအကျင့်၊ 2016) ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးပဋိပက္ခဖြစ်သနည်း Pornhub Amazon.com ပေါ်တွင်စာအုပ်များအတွက်လေးပြန်-ဖုံးထောက်ခံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယခုမှာငါတို့၌ရှိသော Josh Grubbs ရှိသည် Co-ရေးသားဂျာနယ်ဆောင်းပါးများကို ရဲ့ buddy ဒါဝိဒ်သည် Ley အတူညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ၏ပျော်စရာအောင်အတွက် Ley ပူးပေါင်း:
ဤသည် Grubbs tweet မေလ, 2017 ကနေ - သူသည်သူ၏လက်ရှိစက္ကူ "debunking" porn- သွေးဆောင် ED ထုတ်ဝေမီ။ မည်သူမဆိုဘက်လိုက်မှုလား။
Nicole Prause သည်လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီးအခြားသူများအားသတိပေးရန်ကြိုးစားနေကြသည့်လူငယ်များကိုအနှောင့်အယှက် ပေး၍ အယောင်ဆောင်ခြင်းဖြင့် PIED ကိုဖျက်ပစ်ခြင်းကိုစွဲလမ်းနေခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
ထို့အပြင် (Ley ၏အကူအညီနှင့်အတူ) Prause တစ် ဦး ဆင်နွှဲခဲ့သည်4နှစ်စစ် ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဒီ7အမေရိကန်ရေတပ်သမားနှငျ့ပတျသကျသောပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဂယ်ရီ Wilson က (ဆန့်ကျင် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ): အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (ပန်းခြံ et al။ , 2016)။ (သိပ်အများကြီးပိုပြီးမြင်သည်: အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း။ ) ယောရှုသည် Grubbs မကြာသေးမီကဆန့်ကျင်ကဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သိက္ခာမဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် Prause နှင့် Ley ပူးပေါင်းထားပါတယ် ပန်းခြံ et al ။ 2016 နှင့်ကြော်ငြာ hominem တိုက်ခိုက်မှု, အမှားကိုအမှန်နှင့်ဆိုက်ဘာ-နှောင့်ယှက် MDPI, မြားတှငျပါဝငျခွငျး။
ပထမဦးစွာဥပမာ: ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2019 အပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအထူးကုမှာဟောပြောချက်ပေးအပ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာများအတွက်ဥရောပ Society ၏ 21st ကွန်ဂရက် လိင်အပေါ်ကိုအင်တာနက်ရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်။ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖော်ပြအနည်းငယ်ဆလိုက်, ကိုးကားပြီး ပန်းခြံ et al။ , 2016, Tweet လုပ်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ချက်တွေကိုနီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Ley, ယောရှု Grubbs နှင့်၎င်းတို့၏မဟာမိတ်များမှာတွစ်တာ-ဒေါသညွှန်ကြားစေ ပန်းခြံ et al။ , 2016 ။ ဒီချည်ခုနှစ်တွင် Grubbs Prause ပူးပေါင်းမည် အမှားကိုအမှန်နှင့်ကြော်ငြာ hominem တိုက်ခိုက်မှုများသူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းအစုံအတွက်:
ထင်ရှားသကဲ့သို့အထက်တွင်အားလုံးသည်အချည်းနှီးသောအသရေဖျက်မှုဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ။ အဆိုပါ Prause, Ley နှင့် Grubbs tweets အပေါငျးတို့သအတွက်သူတို့ကစက္ကူရဲ့ "လိမ်လည်မှု" သို့မဟုတ်၏တစ်ခုတည်းသောဥပမာများကိုဘယ်တော့မှကြောင်းသတိထားမိ "မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများ။ " ကြော်ငြာ hominen တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အမှားကိုအမှန်သာလျှင်။ Prause ၏ခြောက်လသုံးသပ်ရေးတဦးဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းက ပန်းခြံ et al ။ , စက္ကူအဘယ်သူမျှမလိမ်လည်မှုပါရှိသည်အပေါင်းတို့နှင့်ရေတပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက၎င်း၏စုစည်းအတွက်လိုက်နာခဲ့ကြသောကြောင့်, သငျသညျဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှမ "။ လိမ်လည်မှု" ဟုသူမကတစ်အပိုင်းကောက်နှုတ်ချက်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှင်းပြနိုင်ထင် ... ညြဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပေသည်။
Grubbs တိုက်ခိုက်ခဲ့သာ ပန်းခြံ et al ။ Prause ကဲ့သို့အချည်းနှီးသော drivel နှင့်အတူသူလည်း groundlessly မိဘဂျာနယ် MDPI (တိုက်ခိုက်ခဲ့Prause ထပ်တလဲလဲပြုတော်မူပြီနည်းတူ) ။ တစ်ဦးက Two-tweet smear ဇန်နဝါရီလ, 2019 ထံမှ:
အပိုဆောင်း MDPI smearing tweets။ ယခုအကြိမ်သည်“ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု” ဖြစ်သည်။
ဤတွင်သူသည်နောက်တဖန်ဝင်, MDPI တိုက်ခိုက်နေ:
MDPI အပေါ် Grubbs တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပန်းခြံ et al ။ သူသည်ဤစာမျက်နှာတွင်ဝေဖန်သောစာတမ်းများကိုသူထုတ်ဝေချိန် မှစ၍ စတင်ခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်မှု? အများစုမှာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ညစ်ပတ်စွဲလမ်းမှုကိုပယ်ချခြင်း၊ အင်တာနက်စွဲလမ်း, စဉ်တွင် porn နှင့်အတူအားလုံးနီးပါးပြဿနာများကိုဘာသာရေးကငျြ့တရားအထဲကပေါ်ထွန်းသောအအားကောင်းမောင်းသန် (စာဖတ်သူများကိုဘုရားမဲ့ဝါဒီများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို သုံး၍ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမခံစားနိုင်ဟုမှားယွင်းစွာထင်မြင်စေခြင်းဖြင့်) Prause & Ley …ယခုသူသည်သူ၏လူမှုမီဒီယာဂိမ်းကိုမိမိဆရာနှင့်လိုက်ဖက်ရန်တက်နေသည်။ ဥပမာ:
ဤစာတမ်း ED တစ်ခုကပ်ရောဂါမျှမရဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာမလုပ်ပဲနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ED ၏အခိုင်အမာကပ်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်ပါ:
ဆန့်ကျင်မှသက်သေအထောက်အထားများရှိနေသော်လည်းထောက်ခံအားပေးမှုနှင့် Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများ၏နံပါတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏တစ်ဦးကပ်ရောဂါကားမောင်းကြောင်းဟုဆိုကာအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
အထက်ပါကောက်နုတ်ချက်၏ပထမဆုံးစကားလုံးများဖြင့်စတင်ပါမည် အဘယ်သူမျှမ ဖြားယောင်း "ဆန့်ကျင်ဖို့သက်သေအထောက်အထား။ " ဆန့်ကျင်တဲ့ဒီသက်သေသာဓကကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
1) Prause နှင့် Pfaus, 2015: Prause နှင့် Pfaus ယင်း၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့မပေးခဲ့ပါဘူး။ သုတေသီရစ်ချတ် Isenberg, MD နဲ့တစ်ဦးအလွန်ကျယ်ပြန့် Lay ဝေဖန်မှုအားဖြင့်တရားဝင်ဝေဖန်မှုကိုကြည့်ပါ:
ကျယ်ပြန့် Lay ဝေဖန်မှု: အဘယ်အရာကိုမျှသံသယရှိလေ့လာမှုအတွက် Up ကိုထည့်: လူငယ်ဘဝတွင်စိတ်ကျအောကျခံ '' ED လက်ဝဲ Unexplained (2015)
Prause နှင့် Pfaus 2015 ED နှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာမှာအားလုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, Prause သူမ၏အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြေရှင်းပေးသောအဘယ်သူအားမျှလေးကနေဒေတာတွေကိုစုရုံးရန်ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် data တွေကိုစက္ကူအခြေစိုက်ခံရဖို့အခိုင်အမာထားတဲ့အပေါ်အခြေခံလေးလေ့လာမှုများအတွက် data တွေကိုမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးအဖြစ်နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နေဖြင့်ဤစာတမ်း peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါကှာဟအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, ပလပ်မရနိုငျသောတွင်း gaping ။ ထို့အပြင်စက္ကူအတုအယောငျဒါမှမဟုတျသူတို့ရဲ့ဒေတာကမထောက်ပံ့ခဲ့ကြကြောင်းအတော်ကြာတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နှစ်ဦးစလုံး မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း သူတို့ရဲ့နည်းစနစ်များနှင့်တွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်. မီဒီယာမှ။
2) Landripet နှင့်Štulhofer, သည်အခြားဆိုင်တဲ့ data တွေကိုချန်လှပ်စဉ် 2015 ကြောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဂျာနယ်က "အကျဉ်းချုပ်ဆက်သွယ်ရေး" နှင့်မျှဝေဖို့သာအခြို့သောဒေတာများကိုရှေးခယျြနှစ်ခုစာရေးဆရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ နှင့်ဝသကဲ့သို့ Prause နှင့် Pfausအဆိုပါဂျာနယ်အကြာတွင်၏အားနည်းချက်များကို addressing ကိုတစ်ဦးဝေဖန်မှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Landripet နှင့်Štulhofer: အပေါ်မှတ်ချက်: Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Is? Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
သောအရေးဆိုမှုအဖြစ် Landripet နှင့်Štulhofer, 2015 နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်, porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြားအဘယ်သူမျှမဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ ဒီ YBOP ဝေဖန်မှု နှင့် စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကို, မျိုးစုံရေတပ်ဆေးသမားကပူးတွဲရေးသား။ ထို့အပွငျ Landripet နှင့်Štulhoferရဲ့စက္ကူစာရေးသူတဦးအစောပိုင်းမှာတင်ဆက်ခဲ့သောသုံးသိသိသာသာဆက်စပ်, ချန်လှပ် ဥရောပကွန်ဖရ။
အညီအမျှအရေးကြီးသည်, မိမိရေး-Up အတွက်, အဘယ်ကြောင့် Grubbs ဟာလျစ်လျူရှုခဲ့ကြ 27 peer-ပြန်လည်သုံးသပ် Studiesလိင်မှုကိစ္စပြandနာများနှင့်နှိုးဆွမှုနည်းခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြpornနာများဆက်စပ်မှု - အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများသည်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်ပြwhereနာများကိုကုသပေးခဲ့ခြင်းလား။
ဤတွင်အလားတူကောက်နှုတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ သူသည်စာနယ်ဇင်းအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏တူညီသောအားနည်းချက်ရှိသောစကားပြောနေမှုကိုအိမ်သို့ဖိအားပေးရန်ကြိုးစားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်တက်ကြွညစ်ညမ်း-သုံးပြီးလူတို့တွင်, လေးနက် erectile ပြဿနာများ, တန်ပြန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ED တစ်ခုကပ်ရောဂါကားမောင်းကြောင်းအကြံပြုတစ်ဦးလူကြိုက်များဇာတ်ကြောင်းဖို့ပြေးတဲ့တွေ့ရှိချက်ရှားပါးပုံရသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတကယ်တော့, ဒီမှာ3နမူနာခဲ့ကြသည် လိင်တက်ကြွဖြစ်ကြပြီးသူ၏ IIEF (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး) သူကိုယောက်ျားရမှတ်တော်တော်လေးကောင်းသောခဲ့ကြသည်။ ရိုးရိုးလေးဤစာတမ်းတွင်ထားပါ ED နှင့်အတူအဓိကအားဖယ်ထုတ်လိုက်ယောက်ျား, လိင်မလှုပ်မရှားလူတို့သညျမပါဝင်ခဲ့သလဲ, သမီးကညာမပါဝင်ခဲ့ပါ။ (ဤစာရေးသူငြင်းပယ်သော) က "ED ကပ်ရောဂါ" ဖွဲ့စည်းသူမြို့သားတို့သည်အရှင်, များစွာသော ဒီလေ့လာမှုကနေချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအသေးပင်အတွက် ဤ စက္ကူ porn နှစ်ဦးစလုံးစွဲ နှင့် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ဆင်းရဲတဲ့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာမှဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်အမှန်တရားငြင်းပယ်တို့အားဤသို့သောအခြင်းဝေဒနာကိုသွား?
၎င်းတို့၏အခိုင်အမာထောက်ခံရန်ဘာမှကိုးကားပြီး Grubbs နှင့်သူ၏တွဲဖက်ရေးသားသူမှားယွင်းစွာကို "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝုိင်း" နိဂုံးပိုငျး ED တစ်ခုကပ်ရောဂါ၏သက်သေအထောက်အထားများမတွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်:
ထို့အပြင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝုိင်းအဖျားမကြာသေးမီနှစ်များတွင်လူပျိုတို့အတွက်ပညာရေးတစ်ခုတိုးပွားလာမှုနှုန်း၏သက်သေအထောက်အထားများမတွေ့ရှိသည်ဟုပေးသော, ပစ္စုပ္ပန်အလုပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ED တစ်ခုကပ်ရောဂါကားမောင်းသောအယူအဆဆန့်ကျင်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။
သမိုင်းဆိုင်ရာ ED နှုန်းထားများ: အခါ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပထမဦးဆုံး 1940s အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့သူတို့အား 1-30 အတွက် 3% ထက်လျော့နည်း 30 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျားအတွက် 45% ထက်လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ လုလင်တို့သည်ပေါ် ED လေ့လာမှုများ, ဒီ 2002 အတော်လေးကျဲနေမြဲနေစဉ်6အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးလေ့လာမှု Meta-analysis သည် အဆိုပါ5၏6ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% ၏2အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ 6th လေ့လာမှု 7-9% ၏ကိန်းဂဏန်းများကဖော်ပြခဲ့သည်ပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့မေးခှနျးကို5သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မရနိုင်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရန်ဘူး ရှည်ကြာသော တခြားသူတွေခဲ့အဖြစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အဲဒီအစားသူက "မေးလျှင်,သင်သည်အမှုရောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိခဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်? "
2006 ၏အဆုံးမှာအခမဲ့, streaming porn ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များလိုင်းပေါ် လာ. , နှင့် instant လူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ ဤ အခြေခံကျကျ porn စားသုံးမှု၏သဘောသဘာဝကိုပြောင်းလဲ။ သမိုင်း၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ကြည့်ရှုမည်သည့်ချောင်းမြောင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session တစ်ခုအတွင်းမှာလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူမြင့်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ED နှုန်းထားများဖို့ဘာဖွစျခဲ့သလဲ
2010 ကတည်းကဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ: 2010 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖေါ်။ ဤသူကားအ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်ဤ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးသမားကပူးတွဲရေးသား - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)။ အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ 10% ကနေ 40% အရွယ်ရှိနေစဉ် 14 လေ့လာမှုများမှာတော့ 37 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။
နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမ variable ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးကနောက်ဆုံး 2006-10 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ streaming porn (20) ၏ထွန်းကားထက်အခြား (ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 20 ကတည်းကတက်သာ 40%, အထီး 4-1999 အတွက်အဝလွန်နှုန်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - ဒီလေ့လာမှုကိုတွေ့မြင်).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်မကြာသေးမီခုန်ကျော်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖို့ "porn စွဲ" နှင့်အောက်ပိုင်း arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများ။ ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများအပြင်, ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွမ်းကျင်သူ ၁၅၀ ကျော်ပါဝင်သည့်ဆောင်းပါးများနှင့်အင်တာဗျူးများပါ ၀ င်သည် (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ။
porn အသုံးပြုမှုလက်ရှိနာရီပဲ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းစေခြင်းငှါများစွာသော variable တွေကိုတစ်ခုဖြစ်တယ်
ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အပိုဆောင်း variable တွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤ 2016 ပြန်လည်သုံးသပ် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့သာ "ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လက်ရှိနာရီ" correlating အတွက်အားနည်းချက်မီးမောင်းထိုးပြ။ လက်ရှိကြည့်ရှုအားပေး porn ပမာဏကိုပဲ porn-သွေးဆောင် ED ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြား variable တွေကိုတဦးဖွယ်ရှိသည်။ အခြားသူများကပါဝင်နိုင်ပါသည်:
(စေ့စ့စပ်စပ်နမူနာ #3 အတွက် related ခဲ့သော) hypersexuality / ညစ်ညမ်းစွဲ၏ရောက်ရှိခြင်း
ဒါဟာအစ, edging အကြောင်းကိုထှတျအထိပျကိုရှောင်ရှားနေစဉ် porn မှ masturbating ၏အန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အကျင့်ကိုမေးမှအသီးကိုသီးလိမ့်မယ်။
ဤဖြစ်စဉ်ကိုသုတေသနလုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရလဒ်များအားလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပြီးကုသပေးသည့်ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောသုတေသနကအကြံပြုထားသည် causation ဖြစ်နိုင်ချေမှားယွင်းသောပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆက်စပ်မှုများ - နှင့်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကဲ့သို့အစီအစဉ် - မောင်းနှင်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်ပွင့်လင်း။ YBOP မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် porn ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်သူတစ်ဦးအနည်းငယ်တထောင်ယောက်ျား၏ Self-အစီရင်ခံစာများ။
အောက်ပါအချက်များ၏အချို့ထံမှလာ ဒီအစောပိုင်းကဝေဖန်မှု of Prause နှင့် Pfaus 2015 ။ လက်ရှိစက္ကူအတူတူအားနည်းချက်တွေကိုအများစုထံမှကြုံတွေ့နေကြရသည်။
ယောက်ျား erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနောက်ဆုံးမှာတိုးတက်လျှင်ကြည့်ဖို့ porn ကိုဖယ်ရှား (ED porn-သွေးဆောင်ခဲ့လျှင်သိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း) ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ
လေ့လာမှုမှသာသူတို့ကလိင်ရှောင်ရှားကြသည်ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန် ED နှင့်အတူသူတွေကိုဖယ်ထုတ်မယ်လို့အရာလိင်တက်ကြွခဲ့ကြသောသူတို့သညျ (သူတို့ဖြစ်ကောင်းအပြည့်အဝလွ ED ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါဆိုလိုတာက), ပါဝင်သည်
လေ့လာမှု (ဒါခေါ် "porn အပျိုကညာ" အပါအဝင် - အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စီမံခန့်ခွဲမရနိုငျသူ) အပျိုကညာချန်လှပ်နှင့်အရှင်အပေါငျးတို့သပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်လိင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူကို။
porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်တဲ့စစ်မှန်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှဘာသာရပ်များမေးရန်လိုအပ်ပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ် နှင့်နောက်ဆက်တွဲလအတွင်းမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်ထားသည်။
ဤအတောအတွင်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မကြုံစဖူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဆင့်များနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောလူငယ်များ၏ကံမကောင်းစွာဖြစ်ရပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပိုမိုအသိစိတ်ရှိသောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သည်မှာထင်ရှားသည်။ သုတေသီများသည်စာဖတ်သူများအားလှည့်ဖြားမည့်အစားသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်စာပေအခြေအနေများကိုဖော်ပြရန် ပို၍ တာ ၀ န်ယူသောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သည်။